Iinqwelo moya zaseMelika ezingafakwanga kwi-COVID zizodwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo moya zaseMelika ezingafakwanga kwi-COVID zizodwa
Airlines • uhambo ngomoya • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ilungu labasebenzi beenqwelo moya zaseMelika
Umgaqo-nkqubo omtsha waseAmerican Airlines uthetha ukuba abasebenzi abangagonywanga behla ne-COVID-19 kufuneka basebenzise iintsuku zabo zokugula ngalo naliphi na ixesha abafuna ukuphuma ngalo emsebenzini. Oku kuphelisa ikhefu elikhethekileyo lendyikitya yokufa laseMelika elalisethwe emva kokuba i-coronavirus iqale ukudlala-ye-unvaxxed, oko kukuthi.
Xa i-COVID-19 iqala ukubonakala, iinkampani ezininzi ziye zahanjiswa ukwenza ikhefu lobhubhane kwabo behla ne-coronavirus.
Ngoku ukuba uLawulo lwezoKutya kunye neZiyobisi lunesitofu esigunyazisiweyo sokulwa i-COVID-19, oku kuyabutshintsha ubuso benkampani ekulungeleyo ukuyenzela abasebenzi bayo abakhetha ukungagonyo.
Ukuqeshwa okutsha kwezi ntsuku kuyafuneka ukubonisa ubungqina bokugonywa ukugqibezela inkqubo yokuqesha.
Umgaqo-nkqubo omtsha uza kuqala ekuqaleni kuka-Okthobha kwabangengoma-vaxxers, nangona kunjalo, abasebenzi baseMelika beenqwelo moya abagonyiwe basagutyungelwa ngumgaqo-nkqubo wekhefu lobhubhane kwaye akufuneki basebenzise iintsuku zabo zokugula ukuthatha ikhefu emsebenzini ukuze bafumane kakuhle.
Oku kubonakala kuyinto eqhelekileyo phakathi kweenqwelo-moya, njengoko iAlaska Airlines ikwa thintele abasebenzi abangasebenziyo ukuba basebenzise intlawulo ekhethekileyo ye-COVID-19 yomsebenzi ongekhoyo ngenxa yentsholongwane.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, iAlaska Airlines ikwavuza abasebenzi bayo ngebhonasi eyi- $ 200 yokufumana ugonyo, kwaye bonke abasebenzi abatsha abaya phambili kufuneka babonise ubungqina bokugonywa ngaphambi kokuba baqeshwe ngokusemthethweni. I-airline ifuna ukuba bonke abasebenzi abangagonywanga bathathe inxaxheba kwinkqubo yokufunda ngemithi yokugonya.
Inyanga ye-Las, i-United Airlines yayingumphathi wokuqala wase-US ukufuna ugonyo kubo bonke abasebenzi basekhaya. I-United inabasebenzi abangama-67,000 e-US kwaye yonke imisebenzi emitsha kuye kwafuneka ibonise ubungqina bokugonywa ukusukela ngeyeSilimela ka-2021. Kwii-ofisi zeenkampani zase-United, abasebenzi abangaxelelwanga kufuneka banxibe iimaski zobuso.
Iinqwelomoya zeFrontier ziya kufuna ukuba abasebenzi bagonywe ngokupheleleyo nge-1 ka-Okthobha yalo nyaka. Abo basebenzi bakhetha ukungagonyo kuya kufuneka bathathe inxaxheba kuvavanyo lwe-COVID-19 rhoqo.
Ezinye iinqwelomoya bazama ukufumana abasebenzi babo ukuba bagonywe njengeAlaska Airlines eyenze ngokunika izikhuthazi ezifana nentlawulo eyongezelelweyo okanye ixesha elihlawulelweyo.
Yintoni ebangela olu tshintsho?
xa Ulawulo lweDrug Administration (FDA) lwamkele iPfizer njengesitofu sokugonya, oku kwavula amasango eenkampani ukuba zitshintshe imigaqo-nkqubo yazo ye-COVID-19, nanjengoko esi bekusoloko sisizathu esisetyenziswa ngabasebenzi abangafuni kugonywa - ukuba akukho sitofu sivunyiweyo ngokusemthethweni.
Iinqwelomoya zisafuna zonke izinto ebhodini ukunxiba iimaski ngalo lonke ixesha lokuhamba, ngaphandle kwaxa usitya okanye usela, ewe.
3 amatyala e-COVID-19 ngaphezulu aqinisekisiweyo eNew Zealand
Iimbadada: Kuphela zizinto ezi-5 zehlabathi zokunethezeka kubandakanya ...
Ndwendwela iSwitzerland entsha: Iihotele eziSebenza ziRobhothi ...
Uluhlu lwe-SAS lokuya kwindawo entsha yasekhaya nakwamanye amazwe ...
Inqwelo moya yaseJamani ijikeleze iFleet nge-16 eNtsha ...
IHyatt inyusa iphothifoliyo yayo yokuzonwabisa ngokufumana ...
I-Russia iphinda iqale iindiza eziya eFrance nase-Czech Republic
I-CDC ikhuphe isikhokelo esingxamisekileyo kwiPfizer okanye kwiModerna...
Inkonzo yaseYurophu yokuQala okuZimeleyo ...
Abakhenkethi batyelele iHawaii ngobuninzi kodwa bachitha imali encinci
I-Indiya ifuna i-UK ichithe ukuvalelwa yedwa ukuze kugonywe ...
I-US igcina imida yomhlaba neCanada neMexico ivaliwe ...
Umoya Omtsha wase-Afrika Unomhlobo Omtsha: UmAfrika ...
IBangkok ifuna eyayo iSandbox yezoKhenketho
IScotland ibambe ireferendamu yesibini kwinkululeko ...
I-Disney Cruise Line eya kwiindawo ezintsha ngo-2023
I-Seychelles iya kwidijithali kwinqanaba leendaba lase-Italiya ...
IATA: Ukomelela okuQinisekileyo koNyaka woNyaka wokuThuthwa kweMithwalo yoMoya ukusukela ...
ISt. Regis San Francisco ibhengeza entsha ngokugqibeleleyo ...
Emva kweminyaka engama-20 yoPhando lwe-FBI ...
I-Jet2 iyalela iinqwelo-moya ezintsha ze-A15neo ezili-321
Ukurhweba ngabantu lulwaphulo-mthetho lwehlabathi